ChiBulgaria Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(534 mavhoti, avhareji: 4.00 kubva 5)
Pamhepo kasino masosi anotambira vatambi kubva kuBulgaria
Tarisa uone iro runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuBulgaria uye dzinopa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo yepamhepo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kuti urarame kasino mitambo kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming nevamwe vazhinji.
Iwe unogona zvakare kubvunzurudza nzvimbo dzedu dzepaIndaneti dzekutsvaga webhusaiti kuti tive nepamusoro-soro nekanakisisa pakutsvaga kwepaIndaneti, mabhonasi uye nzira dzokubhadhara dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuBulgaria.
Bulgaria inokwezva vashanyi kwete chete nejecha mahombekombe, asiwo neakawanda akasiyana siyana evaraidzo. Kune mufaro mukuru wevashanyi nevagari vemo, kubhejera muBulgaria zviri pamutemo. Zivai kune vashanyi kukero yedu yepamhepo yekubhejera kuti macasino makuru emunyika ari muguta guru reSofia, pamwe nenzvimbo dzinozivikanwa dzekushanyira. Iyo mvumo yekubhejera inodzora masimba emunyika iyo Nyika Yekubhejera Commission, yakaumbwa nebazi rezveMari reBulgaria. Gwaro repamutemo rinobvumidza kubhejera zviri pamutemo munyika uyu Mutemo mutsva pakubhejera muBulgaria, uyo wakatanga kushanda muna Ndira 1, 2017.
Kubhejera pamhepo muBulgaria zviri pamutemo. Vashandi vepasi rese vanofanirwa kuwana rezinesi rekuita zviitiko zvekubhejera mudunhu renyika. Kubva muna Ndira 2017, kune akawanda epamhepo ekubhejera nzvimbo muBulgaria - kubva pamhepo makasino kune epamhepo mabhukumaki. Mhando dzakakurumbira ndePokerstars, bet365, bwin uye betfair.
Rwokutanga rwe10 yeBulgaria Top Online Casino Sites
Bulgaria inyika inokwezva vashanyi vane zororo rakajeka muGungwa Dema, nzvimbo dzekuchengetedza ski uye macasino echic. Iko kusanganiswa kweakanaka sevhisi uye nemitengo yakasununguka yedemokrasi inoita kuti nyika ino ive chinhu chekuwedzera kutarisisa kwevashanyi vanobva kumativi ese epasi. Basa reCasinoToplists ndere kutsvaga kuti zvinhu zviri sei nekubhejera uye online macasino muBulgaria parizvino.
Kubhejera nemitemo kubva ku1979 kusvika ku2017;
Makasino epamhepo evashandisi vekunze anofanirwa kuve nerezinesi reBulgaria. Mamwe ese akavharirwa;
Kana wekunze opareta asina kuvharirwa, unogona kutamba. Asi panjodzi yako wega (inogona kudzivirirwa);
Kasinasi dzenyika sekutonga muhotera 4-5 nyeredzi, kubva kumakore 18 yekare + pasipoti;
Iwe unoda kutamba online kasino? Isu tichakuudza maitiro ekuita izvi - nhanho-nhanho mirairo;
Bulgaria: geography uye nhoroondo, nzvimbo dzinofadza muSofia, chokwadi chinonakidza pamusoro penyika uye vagari vayo.
Mitemo yeBulgaria pakubhejera - nhoroondo inotaurwa
1979 Kuvhurwa kwekasino yekutanga muSofia hotera "Vitosha"
1999 "Mutemo weKhazart" mutemo unodzora kubhejera munyika. Kuburitswa kwemalayisensi neHurumende Commission yekubhejera. Chaizvoizvo, varimi vemuno vane kodzero yekuvhura kasino. Kuti uwane rezinesi kumakambani ekunze anofanirwa kutenga hotera ingangoita 4 *.
2000 Vatengesi vepaIndaneti vari paIndaneti vanofanira kuwana pepanisi kubva kuHurumende Komiti yeKambera (SCG).
Zvepamutemo, chete iyo makasinasi ane zvibvumirano muBulgaria anobvumirwa.
Mamwe makasitori ekunze akavharwa neIndaneti uye kunyange avo vane chiremba muEuropean Union (iyo, chokwadi, inopesana nemitemo yeEuropean Union pamusoro pekutengeserana pachena).
Zvinoenderana nemitemo yenyika, anoshanda anofanirwa kuvepo panzira yenyika, ave nedunhu rakasiyana uye kubhadhara mutero mukufarira nyika.
Kana iyo saiti iri munharaunda yeBulgaria isina kuvharirwa - saka inowanikwa yemutambo.
Land "offline" dzokubhejera muBulgaria
Kasinos ezvepasi pose zvinowanikwa muhotera ne 4-5 nyeredzi uye mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana
Casino inotarisirwa kuwana reisheni kubva kuBulgaria
Anosungirwa mamiriro ekupinda mukasino muBulgaria: zera kubva pamakore gumi nemasere, kuwanikwa kwezvitupa. Iwe haugone kutamba kana iwe uri wakadhakwa kana kudhakwa kudhakwa, wauya mune yunifomu uye uri mushandi wehurumende kana uine hukama nebhizimusi bhizimusi (kunyangwe hama dzevaridzi vemakasino nevashandi havagone kubvumidzwa kutamba).
Online kasino muBulgaria - Ungatanga sei kutamba online kasino?
Takasarudza kuumba nhanho-nhanho-yekuraira maitiro ekutanga kutamba mune yepamhepo kasino. Semutemo, macasino ese ekune dzimwe nyika anoshandisa chiRungu chepasi rese, saka zvirinani ruzivo rwepadiki rwauchazoda.
Tarisai kana iyi casino inobvumirwa munharaunda yeBulgaria. Kana iyo kasino isina kuvharwa mudunhu reBulgaria neIP kero, saka inowanikwa yekutamba. Dzimwe nguva makasino haagamuchire vatambi vanobva kuBulgaria, zvirinani kudzidza nezvazvo mune imwe kasino mune yekutsigira sevhisi. Sevhisi yakadai iri mune dzese dzakanaka pamhepo kasino.
Tarisa casino yekuvimbika. Nokuti izvi zvakakodzera kuve nechokwadi chekuti:
Kuvapo kwerezinesi repasi rese rekasino (ruzivo rwuripo pawebhusaiti yecasino munzvimbo yeruzhinji);
Chiitiko chekambani yekusvitsa makore 3;
Mhinduro yakanaka kubva kune vatambi vari pamutambo;
Iyo software yekasino inomiririrwa nevanokudziridza makuru emitambo yepamhepo (NetEnt, Playtech, Microgaming, nezvimwewo).
Sarudza nzira yekubhadhara - kasino inopa sarudzo yemaitiro akati wandei ekubhadhara (VISA, PAYPAL, WebMoney, Skrill, Yandex kana vamwe) uye une kodzero yekusarudza zvakakunakira. Mukuwedzera, tsanangurai mitemo yekupinda nekubvisa mari (dzimwe nguva kubhadharwa kukuru kunobhadharwa muzvikamu uye kweimwe nguva yenguva). Usakanganwe nezvekushandurwa kwemari uye nekutumwa kwevashandisi kutora mari.
Dzidza nezvemamiriro ezvinhu ebasa mumakasino:
Bonus terms (wager) uye customer loyalty programs
Mitemo yekuvhura account (mamwe macasino anoda humbowo hwekuzivikanwa - kurudyi.
Ngwarira mamiriro ezvinhu e casino:
mazwi emabhonasi nemagare,
mamiriro ekunyora (dzimwe nguva kuverenga pepipoti inofanirwa kusimbisa account);
pasinei nokuti unoda kutora software uye woiisa pamutombiyuta yako kana iwe unogona kutamba mumushanduri
zvinoshandiswa kune unyanzvi hwekugadzira (nekuda kwekutamba paIndaneti nemutengesi anorarama)
Ndeupi rudzi rwechengetedzo unovimbisa iyo kasino inopa? SSL data encryption, inoitisa mutambo chirongwa, nezvimwe.
Chisarudzo choga uye zvisarudzo
Ko iyi casino online inopa mitambo inofarira iwe here?
Iwe unofarira kasino dhizaini? Zvese zvinhu zvine hungwaru?
Mushure mekunge iwe waziva nezve ese ari pamusoro mapoinzi, unogona kuenda kumutambo. CasinoTopLists inokuyambira zvakare kuti uverenge ruzivo nezvemitemo yemitambo, masisitimu uye marongero. Saka unogona kukurumidza kudzidza mumutambo, uye yako bankroll ichave iri pasi pekutonga zvirinani.
Nzvimbo yeBulgaria uye nhepfenyuro shomanana
Nyika iri pamhenderekedzo yeGungwa Dema uye miganhu nenyika dzakaita seGirisi, Turkey, Serbia, Romania neMasedhonia. Kwenguva yekutanga nezvevaBulgaria zvinotaurwa mugore re354. Kubva panguva iyoyo, nhoroondo yenyika ino yakaitika zviitiko zvakawanda: kwaive kukunda kweOttoman Humambo mukupera kwezana ramakore rechi14, kutora chikamu muhondo neSerbia panguva yeHondo Yenyika Yekutanga, uye kutora chikamu muHondo Yenyika II kudivi Jerimani . Yemazuva ano Bulgaria yakaumbwa muna 1989 uye ikava reparamende republic. Iye zvino nyika yakakamurwa kuita zvikamu makumi maviri nemasere neguta guru reSofia.
Bulgaria pamepu yeEurope
Alexander Nevsky Cathedral . Kero: Aleksandar Nevski 1 1000. Yakavakwa muna 1912 uye inomira pakati pemamwe machechi nemamongi nemukuru wayo. Unyanzvi - vanhu zviuru zvishanu.
National History Museum . Kero: Vitoshko Lale Street 16, 1618. Pano zvakagadzirwa zvekare zvakaunganidzwa kubva kunguva dzekare kusvika mazuva edu.
National Picture Gallery . Kero: пл. "Muchinda Alexandre I" №1. Vadi veArt vachazofarira kushanyira chiratidziro chemakumi mashanu emifananidzo yevatenzi vane mukurumbira vanobva kutenderera pasirese. Zvakare pano zviratidziro zvehunyanzvi hwazvino uye tenzi makirasi.
City Zoo . Kero: Central yekupinda iri paSimeonovsko Shosse boulevard. "Kupinda kwekumadokero kubva kuSrebarna mugwagwa 1. Panharaunda yemahekita mazana maviri neshanu iwe uchasangana nezvakawanda zvisingawanzo mhuka uye shiri.
St. Sophia Cathedral . Kero: Paris mugwagwa 2. Iyi ndiyo Cathedral, yakavakwa muzana ramakore rechitanhatu, yakapa zita kuguta guru reBulgaria.
Chokwadi chinofadza pamusoro peBulgaria neBulgaria
Sofia ndiro guta rekare kupfuura ose muEurope;
Bulgaria ndiyo nyika yekutanga yeSlavic, iyo mu 865 yakagamuchira chiKristu;
Nyorefabheti muBulgaria ndiCyrillic, yakafanana neyaRussia, tsamba E, E uye E haisi mairi, asi pane tsamba b, uye ichi hachisi chiratidzo chakasimba;
80-85% yewaini yepasi rose inotengeswa kubva kuBulgaria;
Vagari vemo vanobhadhara kusvika ku40% semitero;
Zvidimbu zvekunakidzwa - banichka kana banitza (jira rinobikwa nekuzadzwa kwakasiyana kubva kubrynza kusvika sipinashi) .Cottage chizi senge yakadaro haisipo;
Kiselo mlyako - kefir yenyika - haina zvakafanana munyika, sezvo inogadzirwa pamwe nekuwedzera kwerudzi rwakakosha rwehutachiona. MuJapan iri kudiwa kukuru uye inoonekwa se "mushonga wehupenyu hurefu";
Vanhu veBulgaria havanyanyi kubata nguva uye kunonoka kunotenderwa. Mukuwedzera, vanhu ava vane hunhu hwakadai husingafadzi segodo. Vavakidzani vanofarira zvekukurukurirana;
Bagpipe isimbi yenyika;
Mumataundi ekushanyira pane kazhinji menyu yemuno nevekunze. Nomuzvarirwo, mutsauko wemitengo unowoneka;
"Hongu" kugutsurira kuRussia zvinoreva "kwete" muBulgaria, uye zvinopesana. Chenjerera!
Yakawanda yekuzorora kwangu yaive mutaundi diki rinonzi Bansko. Mukuwedzera kune saizi ine mwero, inozivikanwa zvakare nemitengo yayo ine mwero, hunhu hwakanaka uye nekuramba uchinzwa kwekusagadzikana kushoma. Huwandu hwevashanyi hunosvika pamitengo inotyisa; chibharumu chakazvitutumadza kwenguva yakareba nemhepo, uye akakurumidza kusvika kune imwe nyika inotungamira kurira kukuru, kunoparadza uye kamwe kamwe. Mapoka evashanyi vanobva munyika dzakasiyana dzeEurope, akasanganiswa neyakajairika tsika yevagari - kuturika mifananidzo yehama dzakafa pamikova yepamberi pedzimba dzavo. Nekudaro, vanhu vanobva kuBansko vane zvakare mutsa uye hushamwari izvo, kazhinji, zvinopindirana mamiriro eiyo photonecropolis. Uye zvakare, ini ndaifarira chaizvo kuti mune imwe yekudyira yemuno nechikafu chenyika, mushure mekudya kwekudya nyama hombe, ndakaunzwa muakaundi ndikaroverera padanda rakakosha rine simba rinoshamisa rebanga guru. Kunyangwe kuita zvakafanana nemari haina kupihwa.
Zvino nezve kasino. MuBansko kutaura chokwadi vakasuwa. Kune anovimbisa yakajeka zviratidzo zvakavanzwa zvakajairika-zvakazadzwa dzimba-dzenzvimbo dzedzimba dzemuchina.Uyezve, kunyangwe kusarudzwa kweiyo imwechete slots mavari kunosiya zvakanyanya kudikanwa. Ndinoyeuka nzvimbo mbiri, imwe yaive muhotera Vihren, uye imwe yacho inodada inonzi Blitz. Nenzira, yemakambani ese ekubhejera muBansko akataridzika seanoremekedzeka, kubva kune vamwe zvaisiyaniswa nevashandi vanofadza uye kuvepo kweroulette yemagetsi. Maneja wepano ainyatsogona kutaura chiRussia. Akataura kuti muBulgaria kune chete kasino kasino muSofia neVarna.
Zvakanaka, handisati ndasvika kuVarna, asi ndamboenda kuSofia. Pakutanga, ndaive muPlovdiv. Zvinhu zvakakosha, basa uye mamwe mamiriro. Asi ini ndaive nerombo rakanaka nekuva nezuva remahara. Yakangosara chete kusarudza kuti ungasvika sei kuguta guru reBulgaria. Ini ndanga ndichizonwa, saka zvaipesana nekutora mota yekurendesa, rwendo rwebhazi rwakaitawo kunge rwunonakidza kusagadzikana. Asi mwana wekuUkraine anonzi Taras akauya kuzondinunura. Anga achigara muBulgaria kwemakore gumi uye, sekutaura, ari kuita bhizinesi pano. Taras akandizivisa kuna Volodya, aibva kuSaratov inopisa. Munyika yekumaodzanyemba iyi, mukomana akawana imba yechipiri. Kazhinji, akabvuma kunditorera imwe mari isina musoro. Ari munzira, Volodya akabvuma kuti anga asati amboenda kuSofia kana kasino, uye nekudaro rwendo urwu rwunomufadza seni.
Takasvika muguta guru reBulgaria, pakanga pasina nguva shoma, asi ndaida kuwana nguva yekuzviita. Nekuda kwekukodzera, ndakawona dzinoverengeka dzakakosha nzvimbo dzekushanya, dzandichataura zvakadzama mune zvimwe zvinyorwa, uye manheru akaenda kukasino. Ini ndakakwanisa kushanyira nzvimbo nhatu: Mambokadzi, Viva neLondon.
Iyo Princess Casino iri muRodina Hotel. Iyo inzvimbo yakanaka kwazvo: yakajairwa seti ye roulette, poker uye blackjack - chete matafura mapfumbamwe. Vachibhejera zvinhu zvinogona kuitwa mumadhora, euros uye leva yemuno. Chips dzinobvumidzwa kutengwa dzakananga patafura. Iyo Princess yakanga isina kushata, asi nguva yakanga yapera, uye ini ndaida kuona zvimwe.
Yechipiri mumutsetse wekushanya yaive Viva kasino. Mariri, vatengesi vese vasikana vakapfeka madhirezi akanaka egirini. Kunyanya chikamu chinocherechedzwa chemapfekero acho akadzika decollete, ayo, kunyangwe zvichikanganisa zvishoma kubva mumutambo, asi zvinopa kunakidzwa kwekunakidzwa. Mune ino kasino yaive vanhu vazhinji, yaikwanira vese vemuno nevekunze. Volodya neni takakwanisa kuwana nzvimbo patafura yeblackjack yakachipa - vamwe vese vaive vakabatikana. Saka ndaifanira kutamba mumatanda evana. Padivi pedu paigara murume, pakutanga ndakamutora semunhu akapiswa wechiBulgaria ludoman. Panguva yese iyo mutambo waienderera, akaburitsa zvirevo zvemutauro wake. Chikamu chikuru chemashoko ake handina kuchinzwisisa, mushure mekunge Volodya atsanangura - yanga isiri ludoman, asi baba vemusikana wecroupier mune rakapfeka girini rine mutsipa. Kunyanya, akakumbira mwanasikana wake kuti adzokere kuyunivhesiti uye, nekuda kwekuita zvakanyanya, nguva nenguva aimuti hure.
Panguva iyo maoko ewachi paakapfuura pakati pehusiku, Volodya neni takanga tave kutotamira kune inotevera institution. Iyo kasino yainzi London, yakatikwazisa nemaoko maviri uye ikasiya zvinonakidza kwazvo. MuLondon kune kirabhu poker. Kuratidzwa kunoitwa nguva dzose pano, uye kunozivisa paplasma muhoro yakajairwa. Kunze kweterevhizheni skrini yakarembera pamadziro, ine zvakare ine matafura gumi nematatu uye mamwe maviri ari mukirabhu poker zone. Mune ino kasino pane zvakare VIP imba, asi havazi vese vanobvumirwa imomo. Nenzira, vashandi muLondon vakanaka, asi zvinotova zvirinani, vasingataure neRussia, asi neChirungu kana mumwe mutauro wekunze. Kuziva mitauro hakungogadzirise kunzwisisa chete, asi zvakare kunowedzera huwandu hwese hwebasa.
MuSofia, kune mamwe makasino, asi mazhinji acho horo dzemuchina wekutsikirira une zviratidzo zvinonyengera zvinopenya. Zviri pachena kuti kubhejera muBulgaria hakusi ndiro huru, vanoenda kumutoro wezororo rezvetsika, hapana munhu anouya pano zvakananga nekuda kwemakasino emuno, haisi Vegas yako. Uye kune kushomeka muindasitiri, hongu, asi yangu yakazara pfungwa yaive yakanaka. Uye zvakare, ndakapedza rwendo kuenda kumakasino matatu mune akawedzera, kunyangwe asiri makuru, asi mutengo wemugwagwa uye varaidzo wakabhadharwa zvizere. Nekudaro, kana iwe ukazviwana uri muBulgaria uye uchida kutamba - unogona kuenda zvakachengeteka kukasino yemuno, usangoona iwo mavara ane mavara.
0.1 Kubhejera muBulgaria
0.2 Kubhejera muBulgaria
0.3 Rwokutanga rwe10 yeBulgaria Top Online Casino Sites
3 Kubhejera muBulgaria
3.0.1 Mitemo yeBulgaria pakubhejera - nhoroondo inotaurwa
3.0.3 Land "offline" dzokubhejera muBulgaria
3.1 Online kasino muBulgaria - Ungatanga sei kutamba online kasino?
3.1.1 Nzvimbo yeBulgaria uye nhepfenyuro shomanana
3.1.2 Bulgaria pamepu yeEurope
3.1.3 Zvitsva zveSofia
3.1.4 Chokwadi chinofadza pamusoro peBulgaria neBulgaria
3.2 NezveBulgaria casinos
uptown aces hapana dhipoziti